Conte: “Lacagtu ma ahan wax kasta.” | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Conte: “Lacagtu ma ahan wax kasta.”
Conte: “Lacagtu ma ahan wax kasta.”
Posted by: radio himilo January 16, 2017
Muqdisho – Macalinka kooxda Chelsea, Antonio Conte ayaa ciyaartoydiisa u sheegay in lacagtu wax kasta aysan noqon karin tiiyoo warar hoose ay isasoo tarayaan oo ku saabsan in Costa uu u duulayo dhinaca Shiinaha oo miiska loo saaray adduun lacageed gaaraya 30 malyuun.
Chelsea oo aan Costa kamid dhigin laacibiinta safka hore ee ciyaartii ay Liecester City ku suldaareen 3-0 ayuu macalin Conte hadalkan sheegay – isaga oo aan cidna carabaabin.
Warar ayaase tibaaxaya in muran hoose uu Costa kala dhaxeeyo macalin Conte iyada oo uu soo xaadirin xarunta tababarka kooxda. Waxaase xaaladda cirka kusii shareeray wakiilka Costa kadib markii uu fadhi la yeeshay ergo ka soctay naadiga Shiinaha ka dhisan.
Hayeeshe macalin Conte ayaa ku hal-adag in Costa uu kaliya ciyaarta uga maqnaa dhaawac fudud oo haleelay – isaga oo digniinna ah, kala doorashada sumcadda kooxda weyn ee Chelsea iyo adduunka Shiinaha looga gacan-haatinayo is-barbardhigaan, u diray ciyaartoydiisa.
Hadalka macalinka reer Italy ayaa kusoo aadaya xilli William isna lala xiriirinayo koox ka dhisan CSL kadib markii Chelsea kol hore iska iibisay Oscar iyo John Obi Micheal.
“Lacagtu ma ahan wax kasta,” ayuu Conte u sheegay warfidiyeenka.
“Markii aad u dheeleyso kooxda weyn sida Chelsea, waa inaad niyad ahaan qanacsanaataa.”
“Waxaan nahay koox fac weyn. Waana sharaf weyn qofkii noo ciyaara, sidaas darteed, uma arko caqabad inay ciyaartoydeenna ku tahay kooxda ka dhisan Shiinaha.”
Previous: Gabar La Xaday iyadoo Dhalan 8 saac Oo 18 Sano Ka Dib La Helay.
Next: Wenger: “Faanoole fari kama qodna.”